တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်စားပွဲပေါ်မှာ PST35TS-RS3 - တရုတ် Zhejiang PuSiTuo
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mission, vision & Value ကို
desk related ထုတ်ကုန်
အော်တို & မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများ
ထိန်းချုပ်မှု box ကို PST-N6
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR1-2-R ကို
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR1-2-S က
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR4-3-S က
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR1-3-S က
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR3-3-S က
ရုတ်သိမ်းရေးကော်လံ PST36DR2-3-S က
ရုံးရပ်နေသည်ကိုရုံးအလုပ်သစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ န်ထမ်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြေလျော့နိုင်ရန်အတွက်အလုပ်ထိုင်မယ့်အစားရပ်တည်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အသိဉာဏ်ရုတ်သိမ်းကျန်းမာနှင့်အထိရောက်ရုံးပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရှေ့ဆက်ချခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လျှင် 1. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုအလေးအနက်ထားထိခိုက်လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကိုယ်ဟန်အနေအထားသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, lumbar ရောဂါ, အလေးချိန်ရရှိမှုများနှင့်အများအပြားနာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ 2. အမြဲတမ်းအလုပ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စာဖတ်ခြင်း၏မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ 3. The standing desk promotes better posture, reduced back pain and increased your productivity.
အင်္ဂါရပ်များ: ညီလာခံ Frame က ပြင်သာပြောင်းသာရုတ်သိမ်းစားပွဲပေါ်မှာအဘို့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လွယ်ကူစည်းဝေးပွဲကို frame ရဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံစံများပေး တည်ငြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အဆိုပါတည်ငြိမ်ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာကြီးမားသောဝန်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်, နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရုံးအလုပ်၏လိုအပ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အလင်းကိုရုတ်သိမ်း ဒါဟာအနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်ရုံးပတ်ဝန်းကျင်တွင်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
frame ရဲ့တိုးချဲ့အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) 1080-1800
PS: သင်အထူးအတိုင်းအတာ, မူဘောင်သို့မဟုတ်ကိုက်ညီခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D, ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကအမြဲ optimized ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်တကွသင်ပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခင်: height adjustable office conference electric table PST35QT-D8
နောက်တစ်ခု: Height adjustable desk PST35TF-ET3
လျှပ်စစ် Intelligent အမြင့်ချိန်ညှိဇယား
Ergonomics Desigend စမတ်ရုံးဇယား
အသိဉာဏ်လျှပ်စစ်အမြင့် Adjustments Deskd Dual-Motors က
အသိဉာဏ်လျှပ်စစ်အမြဲတမ်း Desk Dual-Motors က
အသိဉာဏ်အမြင့် Adjustments လျှပ်စစ်တစ်ခုမှာပုဂ္ဂိုလ်ဇယား
L-ပုံသွင်းလျှပ်စစ် Intelligent သုံးခုခြေ Desk
L-ပုံသွင်းအမြင့် Adjustments မူလစာမျက်နှာရုံး Desk
ရုံး Intelligent Desk သည် linear Actuators
အမြင့် Adjustments Desk ရပ်စေရန်ရုံးမှစစ်
လျှပ်စစ်အမြင့် Adjustments Desk ထိုင်နေပြီးတော့ Up ကိုရပ်
တလူတစ်ဦးစားပွဲပေါ်မှာ PST35TT-RS3-90 °
တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်စားပွဲပေါ်မှာ PST35TT-ET2-180 °